Bit By Bit - Ethics - 6.7.3 Funga kutsvakurudza tsika sezvo chinoenderera, kwete discrete
Chavanoitirana nharo pamusoro nezvetsika munzanga tsvakurudzo ari digitaalinen zera kazhinji zvinoitika binary nemashoko; Somuenzaniso, Emotional Contagion chaigadzirwa yetsika kana hazvina yetsika. Izvi mafungiro binary polarizes kukurukurirana, kudzivisa kuedza kukudziridza kugoveranwa dzemunharaunda, kunoita pfungwa usimbe, uye absolves vatsvakurudzi vane kutsvakurudza akanzi "yetsika" kubvira kwavo basa kuita zvakawanda tsika dzinobvumira chipatara chinobatsira. Chinonyanya zvibereko kukurukurirana kuti Ndakaona zvinobatanidza tsvakurudzo nezvetsika kufamba mberi ichi mafungiro binary kuti kuramba pfungwa pamusoro pakutsvakurudza tsika.
Chinhu chikuru chinonyanya kukosha nechinangwa chebhinary chekutsvakurudza kwekutsvakurudza ndechokuti inokurudzira kukurukurirana. Kudana Kutapukisa Kwepfungwa "kusina maturo" kunovhenekera pamwe chete nehutsinye hwechokwadi nenzira isingabatsiri. Asi, zvinobatsira uye zvakakodzera kutaura zvakananga pamusoro pezvinhu zvekudzidza iwe unowana zvinetso. Kubva kubva pakufunga kwebhanari uye mutauro unonyadzisa haisi kudanwa kwatiri kushandisa mutauro wakazara kuti tidzivise tsika dzisina kunaka. Pane kudaro, pfungwa inoramba ichitsika yemitemo ichaita, ini ndinofunga, inotungamirira kune zvakanyanya kunyatsocherechedza uye zvakajeka mutauro. Uyezve, pfungwa inoramba ichitsvakurudza yemitemo yekutsvakurudza inotsanangura kuti munhu wese-kunyange vatsvakurudzi vari kuita basa iro rinenge ratoonekwa se "tsika" -kufanirwa kuedza kuumba unhu huri nani hwepamutemo mumabasa avo.
Kubatsirwa kwekupedzisira kwekutama kune kufunga kwakapfurikidza ndezvekuti kunokurudzira kuzvininipisa kwekunzwisisa, izvo zvakakodzera pakatarisana nematambudziko akaoma maitiro. Mibvunzo yemitemo yekutsvakurudza muzera rekugadzira yakaoma, uye hapana munhu mumwe chete anofanira kunge ane chivimbo chepamusoro pakukwanisa kwake kuongorora nzira yakarurama yekuita.